उद्यमीले कस्तो अर्थ राख्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki Unternehmerkredit
1 उद्यमी ऋण के हो?
2 एक उद्यमीको क्रेडिटको फाइदाहरू
2.1 उद्यमियों को लागि विशेष स्थितीहरुमा उद्यमी क्रेडिट
2.2 उद्यमीहरूको लागि उद्यमी ऋण
2.3 उद्यमी ऋण को लागी आवश्यकताहरु
2.4 संपार्श्विक र परिशोधन
उद्यमी ऋण के हो?
der Unternehmerkredit विशेष गरी उद्यमीहरू र आत्म-नियोजितका लागि विकास गरिएको थियो। यदि तपाइँ एक व्यवसाय क्रेडिटको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको परियोजना क्रेडिट संस्था द्वारा जाँच गरिनेछ र ऋण समितिका राशि व्यक्तिगत रूपमा सहमत भएको छ। एक व्यवसायी मालिकको रूपमा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड तपाईले तपाइँको कम्पनीको लागि सही कानुनी फारम चयन गरेको एक क्रेडिटलाई दिईएको छ। एक निजी ऋण को लागि आवेदन को रूप मा, तपाईंको कम्पनी क्रेडिट संस्था द्वारा दर्जा प्रक्रिया को माध्यम ले मूल्यांकन गरिन्छ। यसको लागि प्रयोग गरिएको मापदण्ड समान होइन। निम्न आलेखले तपाईंलाई एक उद्यमीको ऋण र लेनदेनको विवरणको विशेष फाईलको बारेमा जानकारी दिन्छ।
एक उद्यमीको क्रेडिटको फाइदाहरू
एक विशेष उद्यमी ऋणले तपाईंलाई स्वतन्त्रताको निर्माण गर्न वित्तीय स्रोतहरू प्राप्त गर्ने मौका दिन्छ। तपाईंले आवेदन र अनुमोदन गरे पछि, ऋण रकम कुनै पनि समयमा। एक उद्यमी ऋण प्राप्त गर्दै आधिकारिक ऋण भन्दा बढी जटिल छ। यो कारण यो हो कि तपाईं एक उद्यमी नियमित आय प्राप्त गर्न सक्दैन र यसको प्रमाण प्रदान गर्न सक्दछ। चूंकि तपाईं न केवल अभिनव विचारहरू मात्र हो, तर प्रेरणा र प्रदर्शन पनि, जो अर्थव्यवस्थाको विकासमा सकारात्मक असर हुन सक्छ, तपाईं व्यापार क्रेडिट स्वीकृत गर्नको लागि पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुनेछ। एक कर्पोरेट ऋणले तपाईंलाई वित्तीय बजेट प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको उद्योगमा टेक्नोलोजी नवाचारका साथ लचीला प्रतिक्रियाहरू प्रतिक्रिया गर्दछ, भलेपनि उपलब्ध बजेट पर्याप्त छैन।
उद्यमियों को लागि विशेष स्थितीहरुमा उद्यमी क्रेडिट
केहि क्रेडिट संस्थाहरूले तपाईंलाई व्यवसायिक संस्थापकको रूपमा एक कम्पनीको निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने आकर्षक विशेष परिस्थितिहरूमा उद्यमशीलताको क्रेडिट प्रदान गर्दछ। एक उद्यमीको रूपमा, तपाईं, उदाहरणका लागि, विशेष भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। कंक्रीट सर्तहरूमा, यसको अर्थ यो हो कि तपाईं लचीला ढंगले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ रकममा आफ्नो ब्याक अप स्टार्ट अप फिर्ता भुक्तान गर्नुहोला वा मासिक रकम र यस ब्याज दरलाई कम गर्नका लागि मासिक मोचन दर बढाउनुहोस्। यदि तपाईंको कम्पनीलाई साथसाथै तपाइँले आशा गर्नुभएन भने, व्यापार सुरुवातका लागि क्रेडिट तपाईंको मासिक किश्त घटाउन तपाईंको ऋणदातालाई सोध्ने विकल्प प्रदान गर्दछ। सामान्य लागतमा तपाईलाई सामान्य शुल्क लागु हुने छैन। उद्यमकर्ताहरूको लागि, एक उद्यमीको ऋण वास्तवमा एक लचीला विश्वव्यापी ऋण हो।
उद्यमीहरूको लागि उद्यमी ऋण
तपाईं KfW बैंकमा आकर्षक ब्याज दरहरूसँग उद्यमीहरूको लागि उद्यमशीलताको लागी केवल आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्रेडिट संस्थाले आफैलाई आर्थिक रूपमा समर्थन सुरुवात र मध्यम आकारको उद्यमकर्ताहरूको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। उद्यमी ऋणको लागि ऋणको अधिकतम रकम 10 लाख यूरो सम्म सीमित छ। यदि तपाईं लगानीको लागि ऋण योग प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, केएफडब्ल्यू बैंकले तपाईंलाई पनि एक गारंटी दिन्छ Indemnification 50 प्रतिशतको धेरै मात्रामा।
उद्यमी ऋण को लागी आवश्यकताहरु
एक उद्यमी वा व्यवसाय आधार ऋण प्राप्त गर्नु अघि, तपाईंले केही औपचारिकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ। उदाहरणका लागि, तपाइँसँग आवश्यक पेशेवर र व्यावसायिक कुञ्जीहरू छन् भन्ने प्रमाण प्रदान गर्नु पर्छ। यसको अतिरिक्त, तपाईंको आधारले तपाईंको मुख्य खरिदको सेवा गर्नुपर्छ। जर्मनी र विदेशबाट आएका कम्पनीहरूले ऋण आवेदनको लागि आवेदन गर्न सक्छन् यदि तिनीहरू मुख्य रूपमा निजी स्वामित्वमा छन्। समूह बिक्रीको लागि, कुल योग 500 लाख यूरो भन्दा बढि हुन सक्छ। यदि तपाईं विदेशमा आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, विदेशी संयुक्त उद्यम वा एक सहायक वा जर्मन कम्पनी, जुन कम्तिमा तपाईले तपाइँको कम्पनीमा 30 प्रतिशत राख्नुहुन्छ, एक व्यापार ऋणको लागी आवेदन गर्न सक्छ।
संपार्श्विक र परिशोधन
एक उद्यमीको रूपमा, तपाईंले बैंकको आवेदनको लागि सामान्य संपार्श्विक पनि प्रदान गर्नु पर्छ। तपाईं बैंकबाट संपार्श्विक हदसम्म जान सक्नुहुन्छ। व्यापार संस्थापकको रूपमा, तपाईं क्रेडिट अवधि निर्धारण गर्नुहुन्छ र गैर-भुक्तानी रहित प्राथमिक वर्षको लागी रोज्न सक्नुहुन्छ।
दर्जा: 3.0/ 5।2चुनावबाट।
अघिल्लो लेखभरोसा ऋण
अर्को लेखस्थिर ब्याज दर